Money iyo canshuurta | Refugee Center Online | Refugee Center Online
Money iyo canshuurta
In Maraykanka, dadka ay lacag badbaadin bangiga. Bangiyada ayaa sidoo kale ku siin dadka amaahda si ay u caawiyaan dadka guri ama baabuur iibsadaan. Akhri wax dheeraad ah
Sida loo miisaaniyadda iyo lacagta badbaadiyo
Ma rabtaa in aad si loo badbaadiyo lacag si aad guri iibsato ama baabuur ku iibsado? Akhri wax dheeraad ah
Canshuurta waa lacagta aad bixiso si ay magaalada, gobolka, iyo dowladda Mareykanka. Sanadkasta, waa in aad si dowladda soodirtaa macluumaadka canshuurta, xataa haddii aadan lacag u sameeyaan. Akhri wax dheeraad ah
Waxaa jira fursado badan oo marka lacag u soo diro caalamka. Baro meel ay aadaan iyo waxa aad u baahan tahay in ay lacag si degdeg ah oo jaban diro. Akhri wax dheeraad ah
Ma u baahan tahay inaad soo amaahato lacag? Credit iyo deymaha yihiin labada dhinacba inaad soo amaahato lacag. Baro kaararka deynta, amaahda degdegga ah iyo hababka ugu fiican inaad soo amaahato lacag. Akhri wax dheeraad ah
Miisaaniyad: dhibaatooyinka maamulka lacagta iyo xalalkaMiisaaniyad: dhibaatooyinka maamulka lacagta iyo xalalka. qaxootiga A barbardhigay ugana hor labada nidaam dhaqaale ee xerada qaxootiga iyo America.
Shan fikrado madadaalada free xiiso leh kids aad5 fikrado sahlan oo madadaalo xiiso leh kids aad. Hayso Fun, Bixiya ma jiro! Fikradaha fudud in la sooro Your Kids. The Refugee Center Online.
Qaxootiga ay ka qaybqaadanayaan xubnaha bulshada AmericanQaxootiga ay ka qaybqaadanayaan xubnaha bulshada American. Our dalka waa meel fiican, sababtoo ah ee qaxootiga iyo soo galootiga.